Home News Al-shabaab iyo Ciidamada kenya oo ku dagaalamay Gobolka Gedo!!
Wararka laga helayo Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in duhurnimadii maanta oo arbaco ah dagaal xoogan uu deegaano ka tirsan gobolka Gedo uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo Ciidamada Kenya oo ka mid ah AMISOM.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Kolonyo ay la socdeen Ciidamada Kenya weerar qaraxyo ku bilaawday ay Al-Shabaab kula beegsadeen wadada xiriirisa deegaanada Faxfax dhuun iyo Girileey ee Gobolka Gedo.
Dad ku sugan Gobolka Gedo ayaa MOL waxa ay u sheegeen in dagaal culus uu dhexmaray Ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab kaas oo geystay khasaaro labada dhinac ah.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Millateriga Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaanan noo suurtagelin,hayeeshee Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in weerarkas ay ku dileen Saddex ka mid ah Askarta Kenya,sidoo kalena ay gubeey mid ka mid ah Gaadiidka ciidamada Kenya.